トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Kala kulmaan la saaxiibkiisa ah oo naftayda iyo naftiinna oo mataano ah in aragti ruuxiga ah ay suuragal tahay? Hit?
Haweenay si aad u weydiiso qiimaynta jinni oo aragti ah, laakiin waa ay jiraan dad badan oo doonaya in la xidhiidhiyo inay aayahooda aadanaha, iyo yaqaano dunida ka mid ah wax yar ka badan ruuxiga ah, sidoo kale Irasshaimasu aad jeclaan lahayd inaad la xidhan naftiinna saaxiibkiisa iyo naftiinna oo mataano ah .
naf saaxiibkiisa iyo naf saaxiibkiisa, sidoo kale loo yaqaan saaxiibkiisa naf, waxaa la sheegay in ay labada dhinac resonance ee heer Naf in qofka la xiriira uga noqdeen nolosha hore. Inta badan eg muuqaalada oogada iyo muuqaalka gudaha, waa kuwa la qabsado in Soshisoai ah.
※ in reincarnation
waa naf mataano ah, waxa uu ahaa mid ka mid ah nafta asal ahaan, loo yaqaan waxa lagu qof qof kale u qaybsan naftayda oo mataano ah. Kulmaan daruuri adduun, daruuri ma aha in la xidhan. Xitaa haddii aad la kulmay nafta oo mataano ah, si ay ilaa laba qof ayaa lala Waxaa jira toddobo marxaladood (oo sidoo kale loo yaqaan marxalad iyo tijaabo), waxa la sheegay in laba qof ayaa ku xidhan marka aad labadaba ka badan.
Haddaba, waayo, saaxiibkiisa nafta iyo Seoul, waxa ay u muuqataa dadka qaar waxay leeyihiin iyaga waynaynin gaaladii ku maal-lagala baxo, maxaa yeelay, kuwanu waa ka kooban yahay heerka nafta, ee maal-sheegistii oo ka mid ah tirakoobka guud iyo wajiga (reading oo timir ah ama wajiga wajiga) Looguma tala gelin inuu soo dheegato, waxaa jira dad badan oo u qiimayn ku sameeyay aragtida ruuxiga ah by psychics.
aragti ruuxiga ah iyo faal, ma in la yidhaahdo wax ka duwan, wax ersatz. qiimaynta ee saaxiibkiisa nafta iyo naftiinna oo mataano ah, waa in kiisas badan oo qof oo xoog leh ayaa la soo xulay in ay nidaamka derjada ama mid Ruuxa raaca.
tixraaca | aragtida ruuxiga ah iyo faal, farqiga u of psychics iyo maal-lagala baxo
trust si joogto ah u muhiim ah in aad la tasho si aad u hesho derjada a yaa wax
si ay u xiran yihiin ee nafta iyo naftiinna oo mataano ah waa, in waa inaad marka hore la kulmaan, oo kaliya sababtoo ah waxaan la kulmay, dabeecadda ku xiran tahay doonista dhammayn ee Meyeydaan wax aan Adduun xiran yihiin.
Sidaa darteed, haddii aad hesho aragti ruuxiga ah, in qofka ugu horeeya oo ay wax ka muuqaalada sida, marka waa in aad meesha in ay la kulmaan wax maqli.
iyo ka dib marka aan ka hor yimid, waxaan u baahan nahay si ay u tagaan si ay horumar si taxadar leh xiriir ila talo ah in psychics kuwaas oo si joogto ah la aamini karin.
gaar ahaan in ay dhacdo nafta oo mataano ah, iyo waxa la sheegay in ay jiraan todoba marxaladaha laba qof ayaa ku xidhan, hal, waxaa jira marxalad ah in ay mar kale ku xidhan yahay in ay la kulmaan nabad gelyo.
wakhtigaas, oo ay ahayd qaddar in jabsada laba qof, hal mar oo aan ogolaansho Kimetsuke, halkaasoo dhamaadka yahay xiriirka ka dhexeeya mataanaha Seoul ee, laba qof oo aan la xidhan noqon doonaa is soocay.
Taasi waa sababta, si aad u codsato aragti ruuxiga ah oo joogto ah, in laba qof ayaa ku jira haatan halkaas oo in marxaladda, waxa aad wixii aad samayn lahaydeen, waayo, haatan masraxa, waxaa loo baahan yahay in la sii wado si loo hubiyo mid mid.
7 ilaa ay ku xidhan oo la mataano Seoul (yada) Marka faahfaahinta ku tilmaamay
naf mataanaha ah ee masraxa, waxa uu noqon doonaa mid aad u dheer, aad leedahay si aad halkan oo keliya bandhigo nooca stage.
koowaad "aqoonsi (shirka)" _ x000D_ marxaladda labaad "tijaabo"
marxaladda saddexaad "dhibaato"
wareega afaraad "orodyahanka iyo chaser (muddo aamusan, muddo fadhiidka ah)" _ x000D_ wareega shanaad "ha tagaan"
ugu horeysay 6 stage "toosiyaan"
stage toddobaad "wada noolaanshaha (kulan)" _ x000D_
bartey u malaynayaa in aan ka heli image ah, laakiin marxaladda in qeybtii hore hal mar in aan hore u soo sheegnay waa heerka shanaad "ha tagaan" sida lagu wacayo. Ka sokow, sida "dhibaatada," "muddo aamusan, muddo fadhiidka ah", inay ilaa laba qof ayaa ku xidhan, khasab ma aha oo kaliya dhacdooyinka fiican, tiro ka mid ah caqabadaha iman doonaa.
aan ogayn wax, iyo in ay la kulmaan caqabado kuwan, ee sida si loo horumariyo heerka ugu halka hesho talo ku salaysan aragti ruuxiga ah oo joogto ah, marka la eego ama aan margin maskaxeed iyo ficil sax ah loo qaadan karaa Waxaa qabsadey farqi aad u weyn.
aragti ruuxiga ah ma aha wax aan caadi ahayn in ay haamuhu tixraaca
| aragti ruuxiga ah sababta off yimaado naftaada noqon? The sababta ugu weyn ee qiimaynta aragti ruuxiga ah waa out faahfaahinta
ayaa looga hadli doonaa in this page, xitaa haddii ay noqon doonto iyadoo aan loo eegayn psychics sida dhabta ah awooda, taas oo ku xidhan ee waafaqsan iyo Milanello ee wada tashiga ee ka, iyo waxaa jira in heerka hit leh doonaan waxaan arrinkaas. Haddii
ka badan rabto ku xidhan yihiin ee ay nafta iyo nafta oo mataano ah, karti iyo waafaqid si fiican, sidoo kale waa mid ka mid ah hab sababtoo ah fasax si aad u hesho a derjada lagu kalsoonaan karo ka hor. Waxaan qabaa in si sahlan loo fahmi oo wuxuu ku raaxaysan la image ah, sida dhakhtar qoys.
naf saaxiibkiisa, ama xataa raadinaya derjada ah ee argagaxa ka fikirka ah in aan la kulmay ee nafta oo mataano ah, ma sidoo kale waxay keeni kartaa inuu seego fursad qaali ah oo ku xidhan oo ay aan la heli karin.